Bilaogera Shinoa Malaza Nosamborina Noho Ny Fanehoan-kevitra An-tserasera Taorian’ny Fandrahonan’ny Polisy Azy Nandritra Ny Taona Maro · Global Voices teny Malagasy
Bilaogera Shinoa Malaza Nosamborina Noho Ny Fanehoan-kevitra An-tserasera Taorian'ny Fandrahonan'ny Polisy Azy Nandritra Ny Taona Maro
Voadika ny 03 Mey 2017 4:29 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, English
Wu Bin nandefa ity sary ity tao amin'ny Twitter tamin'ny 26 Aprily.
Nosamborin'ny polisim-pirenena ao Shenzhen tamin'ny 27 Aprily noho ny fanehoan-kevitra an-tserasera i Wu Bin (@xuicai1911 @秀才江湖), bilaogera Shinoa fanta-daza sady mpaneho hevitra ao amin'ny Twitter, araka ny tatitra iray avy amin'ny Canyu, vohikalam-baovao izay mifantoka amin'ny zon'ny olom-pirenena Shinoa .
Nandefa ny fanairana tao amin'ny Twitter i Wang Aizhong, naman'i Wu, taoriana kelin'izay:
秀才江湖@xiucai1911 刚才打电话来，深圳国保，警察正在他家门口，要进屋带他走，理由只是他在网上发表的言论，关注秀才吴斌。 pic.twitter.com/Re0Uk4GAyc
— 王爱忠 (@wangaizhong) April 27, 2017
Nanao antso sy nilaza i @ Xiucai1911 fa teo ivelan'ny tranony ny polisim-pirenena ao Shenzhen sy ny polisin'ny filaminam-bahoaka, ary hisambotra azy izy ireo. Noho ny teniny tao amin'ny aterineto no anton'izany. Miangavy anao hihaino an'i Xiucai Wu Bin.
Taty aoriana, nanoratra tao amin'ny WeChat (tamin'ny alàlan'ny Canyu) i Huang Meijuan, vadin'i Wu Bin :
Nisy polisy teo amin'ny fito na valo teo tao. Nanao akanjo tsotra ny mpitarika ny ekipan'izy ireo ary mino aho fa polisin'ny fiarovam-pirenena izy io. Nilaza izy ireo fa tsara kokoa raha tsy ao an-trano no atao ny resaka satria efa hiverina avy nianatra ny ankizy. Nilaza aho fa mety raha polisy iray ihany no miresaka ao an-trano. Tsy nanaiky anefa izy ireo. Nanaiky ny handeha ho any amin'ny paositry ny polisy any Buji ihany i Xuicai ny farany. Koa satria izy ireo tsy nitondra filazana an-tsoratra fiantsoana, dia niteny taminy aho mba tsy handeha hiaraka amin'izy ireo. Kanefa namoha ny varavarana ary nanaraka ny polisy i Xiucai . Tsy nandeha intsony ny findainy rehefa lasa izy. Ny laharan'ny findain'ny paositry ny polisy ao Buji dia 0755-28872922, miangavy anao mba hiantso izany ary hanontany ny zava-mitranga.
Nandeha nankany amin'ny paositry ny polisy i Huang ny ampitso mba haka ny fandraketana an-tsoratra momba ny fiantsoana ny vadiny. Nihevitra izy fa haharitra andro vitsivitsy ihany ny fihazonana azy .
Lasibatra noho ny ” fanaraha-mason'ny filaminana” i Wu Bin, ary niharan'ny herisetran'ny polisy imbetsaka tao anatin'ny taona vitsivitsy. Tamin'ny volana Septambra 2013, notànan'ny polisy tao Hanzhou nandritra ny 10 andro izy noho ny “fitabatabana” an-tserasera. Tamin'ny volana May 2014, notànana tsy ara-dalàna izy iaraka tamin'ny mpisinta-kevitra maro hafa talohan'ny tsingerintaonan'ny hetsi-panoheran'ny mpomba ny demokrasia tao Tiananmen taona 1989.
Tamin'ny 14 Novambra 2015, nosamborin'ny politikan'ny filaminam-pirenena sy ny filaminam-bahoaka ao Shenzhen i Wu Bin, rehefa avy nandray anjara tamin'ny fivoriam-bahoaka momba ny “fahafatesana tsy voajanaharin'” ilay olom-pirenena tao Guangzhou antsoina hoe Zhang Liumao fony izy mbola notànan'ny polisy. Tamin'ny 13 Desambra tamin'io taona io ihany, nalain'ny polisy tao Shenzhen i Wu Bin izay nilaza fa hitondra azy hivoaka ny tanàndehibe mandritra ny andro vitsivitsy izy ireo.
Tamin'ny 16 Septambra 2016, nampiantson'ny polisy izay niampanga azy ho nampiely tsaho momba ny hetsi-panoherana tamin'ny tanànakely tao Wukan i Wu Bin. Nosamborina ihany koa ny vadiny tamin'izany fotoana izany, noho ny fitaterana vaovao momba ny hetsi-panoherana tao Wukan ihany koa. Nametraka fitoriana manohitra ny Paositry ny Polisy Long Gang ao Shenzhen izy nanomboka tamin'izay noho fitazonana azy tsy ara-dalàna nandritra ny 10 andro. Nanomboka tamin'ny 28 Aprily ny fitsarana izany fitoriana izany.
Niady mikasika ny fakana tany hatramin'ny taona 2011 ny tanànakely fanjonoana ao Guangdong antsoina hoe Wukan, ary efa maro ireo fihetsiketsehana faobe nitranga. Nanomboka nanao diabe isan'andro ny mponina mba ho fanoherana nanomboka tamin'ny tapaky ny volana Jona 2016 taorian'ny fisamborana ny mpitarika ny hetsi-panoherana Lin Zulian (fantatra tamin'ny anarana hoe Lin taloha Zuluan), lehiben'ny tanàna voafidy .
Mbola tsy fantatra hoe inona marina no nahatonga ny fisamborana an'i Wu Bin. Nilaza izy tamin'ny 26 Aprily fa notànana nandritra ny ora maromaro ny namany Wang Yingguo rehefa avy nihaona tamin'ny namana iray avy any Etazonia. Nandefa fanehoan-kevitra tao amin'ny Twitter momba ny raharaham-pitsarana nitorian'ny vadiny ny polisy tamin'ny 28 Aprily ihany koa izy.
Mitombo hatrany ireo mpisera izay mitsikera ny governemanta no ampiantsoina na tazomin'ny polisy eo ambanin'ity fepetran'ny “fanaraha-mason'ny filaminana” ity. Maro tamin'ny fisamborana sy ny fihazonana no tsy misy tati-baovao ary mangina sy mitsahatra mandefa fanehoan-kevitra an-tserasera ny mpisera amin'ny ankamaroan'ny tranga. Wu Bin sy ny vadiny no anisan'ireo vitsy an'isa izay manohy ny fanandratana ny feony na dia eo aza ny loza mety hitranga.
11 ora izayIndonezia
Manentana ny taranaka vaovao miteny Bali amin'ny alàlan'ny superheroes sy wiki
Mivantana amin'ny 22 Avrily—Myanmar: Fanonganam-panjakana sy tsy fankatoavam-bahoaka
5 andro izayThailandy
Ahiana hanimba ny asan'ny vondrom-piraisamonina sivily ny tolo-dalàna momba ny FTMF ao Thailandy